Malunga nathi -Rizhao Feiqing International Trading Co., Ltd.
I-Rizhao Feiqing International Trade Co., Ltd. isebenza kwimveliso kunye nokuthengiswa kwempahla yezemidlalo kunye nezixhobo zokuqina, ukungenisa kunye nokuthumela ngaphandle kurhwebo
Rizhao Feiqing International Trade Co., Ltd.ise Rizhao, iphiko umsila Shandong Peninsula kunye namanzi eyinkunzi kwezemidlalo. Kule minyaka isixhenxe idlulileyo, besisoloko sinika abathengi bethu iimveliso ezilungileyo, inkxaso yezobuchwephesha kunye nesandi senkonzo yokuthengisa emva kokuthengisa.
Inkampani yethu ijongana nezixhobo zokuqina, izinto zemidlalo, iimveliso zeplastikhi, iimveliso zentsimbi, izixhobo zentsimbi kunye nezixhobo zombane, iimveliso zeenkuni kunye neempahla zenaliti Ukuthengiswa kweempahla, izihlangu kunye neminqwazi, iiofisi kunye nezinto ezisetyenziswa zecomputer; ukungenisa nokuthumela ngaphandle izinto eziqhelekileyo (ngaphandle kwalezo zithintelweyo yimithetho nemimiselo, kwaye ezo zithintelwe yimithetho kunye nemimiselo zinokuqhutywa kuphela nelayisensi) (kwezi projekthi kufuneka zamkelwe ngokomthetho, sinokwenza imisebenzi yeshishini kuphela ngemvume yamasebe afanelekileyo).
Sinemveliso elungileyo kunye nentengiso yobuchule kunye neqela lobuchwephesha. Okwangoku, kukho abantu abangama-20 kwiqela. Inkampani yethu yeyeshishini lenkampani yeRizhao yezempilo, ukuba unomdla kwiimveliso kunye neenkonzo zenkampani yethu, jonga phambili kumyalezo wakho okwi-Intanethi okanye uthethe nomnxeba.